Fikarohana momba ny firaisana Reincarnation sy drafitra Fiainana: Nisy mpivady nateraka tamin'iny andro iny ihany, mariazy ary maty tamin'iny andro iny iny dia teraka indray rehefa zazalahy kambana - fikarohana Reincarnation
Mpikaroka: Harold Fielding
From: Ny fanahin'ny olona, nosoratan'i Harold Fielding
Teraka sy maty i Nyein sy Gywin tamin'ny Andron'io
Tamin'ny taona 1849, zazalahy iray sy zazavavy iray no teraka tamin'io andro io ihany tao amin'ny trano mpifanila vodirindrina aminy amin'ny tanàna kely iray any Burma antsoina hoe Oksitgon. Burma dia fantatra amin'ny anarana hoe Myanmar. Maung San Nyein no anaran'ilay zazalahy ary Ma Gywin no anaran'ilay zazavavy. Ho an'ny fahatsorana, hantsoinay hoe Nyein ilay zazalahy ary i Gywin kosa ilay zazavavy.
Niara-nilalao i Nyein sy Gywin, niara-nihalehibe ary nifankatia. Rehefa tonga olon-dehibe izy ireo dia nanambady ary i Nyein sy Gywin dia niasa sy niasa ho mpiompy.
Nyein sy Gywin dia nahafantatra mpivady tany amin'ny vohitra Oksitgon antsoina hoe Maung Kan sy ny vadiny.
Rehefa niara-niditra ny fiainana izy ireo ny androtr'izay dia maty ny andro iray ihany ireo mpitia, Nyein sy Gywin, lehilahy sy vady.
Fifandraisana nohavaozina amin'ny alàlan'ny Reincarnation: Nyein sy Gywin dia teraka indray ary zazalahy kambana
Tamin'izany fotoana izany, i Britain dia nanao ady tamin'i Burma tamin'ny fikasana hanangana indray an'i Angletera ho toy ny fahefana fanjanahan-tany manjaka an'i Birmania. Nandresy an'io ady io i Britain tamin'ny 28 Novambra 1885.
Fony mbola nipetraka tany Oksitgon, tao amin'ny 1886, ny vadin'i Maung Kan dia niteraka zazalahy kambana. Nomen'izy mivady i Maung Gye sy Maung Nge ny zanany lahy. Ho an'ny fahatsorana dia antsointsika hoe Gye sy Nge izy ireo.
Fotoana fohy taorian'ny nahaterahan'izy ireo dia nandao an'i Oksitgon i Maung Kan sy ny vadiny ary nifindra tany amin'ny tanàna kely tao Kabyu any Burma, izay toerana nahalehibe ny zanak'izy ireo kambana.
Rehefa namorona ny fahaizana miteny i Gye sy Nge dia naheno ny ray aman-drenin'izy ireo nifampiresaka momba an'i Nyein sy Gywin. Gye no nantsoin'ireo kambana tamin'ny anarany hoe Nyein, fa i Nge kosa dia i Gywin no anarany.
Ny ray aman-dreniny dia nahatadidy fa ireo anarana ireo dia mifanandrify amin'ny anaran'ny mpivady efa fantany tany Oksitgon.
Fantaro i Gye sy Nge ny trano taloha sy ny akanjony taloha
Raha jerena ny mety ho tsaroan'ny zanak'izy ireo roa mirahalahy ny fiainany taloha raha ny mpivady Nyein sy Gywin, dia naka ny zanak'izy ireo avy any Kabyu ho any Oksitgon izy ireo sao hahalala ny toerana hahafantaran'izy ireo ny toerana avy amin'ireto olona lasa hypothesize teo aloha ireto.
Eny tokoa, nanaiky an'i Gye sy Nge lalana tany Oksitgon izay mitarika ny tranon'ireo olona efa fantany tamin'ny fiainany taloha toa an'i Nyein sy Gywin. Niaiky ny trano niainany taloha sy tao amin'ity trano ity izy ireo, nahafantatra akanjo izay nentin'izy ireo teo amin'ny fiainany teo aloha.
Mahamarina ny trosa taloha i Nge
Rehefa nifanena tamina vehivavy iray tany Oksitgon antsoina hoe Ma Thet i Nge, izay nahatadidy fa vady taloha izy, Gywin, dia nahatsiaro an-tsitrapo nindrana vola, indrindra fa vola 2, avy any Ma Thet, izay tsy voaloa intsony. Ma Thet dia nanamafy fa nampindrana vola 2 ho an'i Gywin izay tsy voaloa mihitsy.
Gye sy Nge dia manana Physiques mifanandrify amin'ny Fiainan'izy ireo taloha
Rehefa zaza XinUMx kambana izy ireo dia Harold Fielding, izay nanoratra ity tranga ity tao amin'ny bokiny, Ny fanahin'ny vahoaka, nihaona tamin'izy ireo. Nahamarika i Fielding fa ny vatan'ny kambana tsirairay dia nifanaraka tamin'ny toetrany tamin'ny fiainany taloha. Gye, izay nahatadidy ny maha-vady, Nyein, dia lehibe kokoa noho ny kambana taminy. Mifanohitra amin'izany, kely kokoa i Nge, hita taratra ny fananganana vadin'i Gywin.
FAMPIANARANA SY FIVORIAM-BOLA novolavola tamin'ny alalan'ny fanambadiana: Ny mpivady, Nyein sy Gywin, dia namorona indray ho kambana Gye sy Nge. Ian Stevenson, MD avy ao amin'ny University of Virginia dia nanangona andiany kambana 31 izay tamin'ny fahazazany, dia nahatsiaro ny fiainany taloha. Hitan'i Stevenson fa ao amin'ny 100 isan-jaton'ireo tranga ireo, ny zaza kambana dia nanana fifandraisana lehibe tamin'ny fiainana taloha. Raha te hahalala bebe kokoa, azafady, mandehana:
Fiovan'ny lahy sy vavy: Vehivavy i Gywin, fa nipoitra indray ho Nge, lehilahy.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Na dia tsy nisy ny antontan-taratasy momba ny endri-tarehin-tsehatra ao anatin'ireto tranga ireto, ny fanamarihana fa ny mason-koditra an'ny Nyein sy Gywin dia hita taratra amin'ny fananganana an'i Gye sy Nge.